လူထှုလှုပ်ရှားမှုတွေကို တက်တက်ကြွကြွပါ၀င်နေရုံသာမက အမှိုက်တွေကိုပါစနစ်တကျနဲ့ပြန်လည်သိမ်းဆည်းပေးနေတဲ့ အုပ်စိုးခန့် - Myanmarload
လူထှုလှုပ်ရှားမှုတွေကို တက်တက်ကြွကြွပါ၀င်နေရုံသာမက အမှိုက်တွေကိုပါစနစ်တကျနဲ့ပြန်လည်သိမ်းဆည်းပေးနေတဲ့ အုပ်စိုးခန့်
လွန်ခဲ့သော ၁၃ နေ့ က 11:13 February 20, 2021
လတ်တလောမြန်မာနိုင်ငံအတွင်းမှာ ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ အခြေအနေအရပ်ရပ်ကြောင့် ပြည်သူလူထုအနေနဲ့ တတ်နိုင်တဲ့ဘက်ကနေအစွမ်းကုန်ပါ၀င်လှုပ်ရှားနေကြကာ ငြိမ်းချမ်းစွာနဲ့လုပ်ဆောင်နေကြတာကို အားလုံးလည်းသိမြင်ကြမယ်ထင်ပါတယ်နော်.....။ အခုလိုဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ အခြေအနေအတွင်းမှာ အနုပညာရှင်တွေအနေနဲ့လည်း ပြည်သူထဲကပြည်သူတွေပဲဖြစ်တာမလို့ တတ်နိုင်တဲ့ဘက်ကနေ ပရိသတ်တွေနဲ့တစ်သားတည်းရပ်တည်ကာ လှုပ်ရှားမှုတွေပြုလုပ်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။
Photo credit-​ Oak Soe Khant's Facebook acc
အခုလိုလှုပ်ရှားမှုတွေကို တက်ကြွစွာပါဝင်နေတဲ့ လူငယ်အနုပညာရှင်တွေထဲမှာဆိုရင် အုပ်စိုးခန့်တစ်ယောက်လည်း အပါအ၀င်ဖြစ်ပါတယ်နော်။ အုပ်စိုးခန့်ဟာ လူထုလှုပ်ရှားမှုတွေကိုတက်ကြွစွာပါ၀င်နေတာလည်းဖြစ်ပြီး ပရိသတ်တွေအတွက် မုန့်တွေလှူဒါန်းခဲ့ရုံသာမက အမှိုက်တွေအထိပါ စနစ်တကျနဲ့ ပြန်လည်သိမ်းပေးနေတာကိုလည်း တွေ့ရပါတယ်.....။
အုပ်စိုးခန့်ဟာ အခုလိုတက်ကြွစွာပါ၀င်လှုပ်ရှားနေတဲ့သူ့ရဲ့ ပုံရိပ်တွေကို Facebook စာမျက်နှာမှာ
"Free our Leaders ! We want democracy !
We need justice......" ဆိုပြီးရေးသားကာ မျှဝေလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ အခုလိုမျိုး လူငယ်တစ်ယောက်အနေနဲ့ ရဲရဲဝံ့ဝံ့ရပ်တည်လှုပ်ရှားနေတဲ့ အုပ်စိုးခန့်ရဲ့ပုံလေးတွေကို ပရိသတ်တွေအတွက် ပြန်လည်မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်နော်။
သတင်းအရင်းမြစ်: Oak Soe Khant's Facebook acc